Nepal Drishya गठबन्धनमा गढबढ, धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा समाजवादीले उठायो आफ्नो उम्मेदवार
• Sat, May 28, 2022 •
"अमेरिकामा गर्नुपर्ने संघर्ष फिल्म ‘लाइफ एन एलए’मा देखाएका छौं"
"धादिङ त्रिपुरासुन्दरीको अध्यक्षमा कांग्रेसले गोजीको मान्छे खोज्यो"
के शिक्षकले राजनीति गर्न मिल्दैन ?
जीवन र जगतका कुरा
निवर्तमान अध्यक्ष भोजबहादुर रिजालको पाँच वर्षीय अुनभव
धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा मतगणनामा किन ढिलाई ?
बालेनदेखि स्थापितसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी !
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी दुर्गा थापाको के छ योजना ?
"सुनकोशीका जनतालाई भोकै बस्न दिन्न"
"राजविराजका महिलाहरुको हक र अधिकारका लागि लड्छु"
गठबन्धनमा गढबढ, धादिङको त्रिपुरासुन्दरीमा समाजवादीले उठायो आफ्नो उम्मेदवार
Nepal Drishya १३ वैशाख, २०७९ | 26 Apr, 2022
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबीच भएको चुनावी तालमेलको सहमति देशभर लागू हुन सकेको छैन । केन्द्र र जिल्लाका नेतृत्वले सहमतिको आधारमा भागभण्डा गरेपनि तल्लो कमिटीले अवेज्ञा गर्दा गठबन्धन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि यसको असर परेको छ । गाउँपालिकामा गठबन्धनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि दलहरुले आ-आफ्नो उम्मेदवार उठाएका छन् ।
गठबन्धनको भागभण्डाको आधारमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष कांग्रेसको भागमा परेको छ भने उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रको । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले गाउँपालिकामा गठबन्धनबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आफ्नै उम्मेदवार उठाएको छ ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा सल्यानटारका स्थानीय टीकाराम श्रेष्ठलाई वडा अध्यक्षको रुपमा उठाएको छ भने २ बाट व्यवसायी समेत रहेका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार उठाएको छ । यस्तै पार्टीले गाउँपालिकाको ५ बाट शम्भू थापा र ७ बाट रामबहादुर अधिकारीलाई उम्मेदवार उठाएको छ । वडा नम्बर १ को वडा सदस्यमा स्थानीय ईश्वर कंडेल र बिनोद रिजाललाई उठाएको छ । १ काे महिलाबाट सदस्यमा भने अञ्जना पाण्डेलाई उठाएकाे छ । पार्टीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत केही पदमा भने उम्मेदवार उठाएको छैन । वडा नम्बर ५ का उम्मेदवार थापाले गठबन्धनले सम्मानजनक भूमिका नदिएकाले आफू एक्लै चुनाव लड्न तयार भएको बताए । यस्तै वडा १ का कंडेलले गठबन्धनसँग सहमतिको लागि अझै अन्तिमसम्म कोशिस गर्ने नभए आफूहरु पछि नहट्ने बताए । उम्मेदवारलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय आगामी १६ गतेसम्म रहेकाे छ ।
Published Date: १३ वैशाख, २०७९ | 26 Apr, 2022
सहिदहरुले देखेको सपना अझै पुरा भएनः प्रचण्ड
बालेनको जीतमा पत्नी सविनाको बधाई सन्देश : "म तिमीलाई कहिले हार्न दिने छैन"
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख र बेलायति राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता
जनताको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दे राजुको पदभार ग्रहण
भरतपुरमा दोहोरिन् रेनु
जनताको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दे राजुको पदभार ग्रहण Nepal Drishya
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख र बेलायति राजदूत निकोला पोलिटबीच भेटवार्ता Nepal Drishya
"अमेरिकामा गर्नुपर्ने संघर्ष फिल्म ‘लाइफ एन एलए’मा देखाएका छौं" Nepal Drishya
भरतपुरमा दोहोरिन् रेनु Nepal Drishya
बालेनको जीतमा पत्नी सविनाको बधाई सन्देश : "म तिमीलाई कहिले हार्न दिने छैन" Nepal Drishya
सहिदहरुले देखेको सपना अझै पुरा भएनः प्रचण्ड Nepal Drishya
Chairman & Editor: Shibanarayan Giri
Information Department Registration No. : 3215-2078/79
Location: Lakhe Chaur Marga.10, New Baneshwor
Sales & Marketing: 9745373352, 9863200096,9843160160,9847297994,9825143444
Telephone Number: 014105112
Advertisement: [email protected] News: [email protected]